Cloudya: NFON Kachasị Mma Ekwentị Ekwentị | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | General
Nkwukọrịta igwe ojii na-enweta ọnụnọ n'ahịa. E gosipụtara ha dị ka nnukwu ohere maka ụlọ ọrụ, na usoro mgbanwe dijitalụ nke nkwukọrịta a. N'ọhịa a, e nwere ụlọ ọrụ na-anọchi anya ndị ọzọ, nke bụ NFON. Companylọ ọrụ a bụ ọrụ n’azụ Cloudya, igwe ojii telephony sistemụ. N'ihi ya, nkwurịta okwu nke ụlọ ọrụ na-eche mgbanwe ihu.
Cloudya na-achọ imeziwanye nkwukọrịta azụmahịa n'akụkụ dị iche iche. Karịsịa, eziokwu nke inwe nnwere onwe site n'aka ndị ọrụ buru ibu bụ ihe nwere ike ịmasị ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ya mere, n'okpuru anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara NFON a na ihe ha ga-enye.
1 Kedu ihe na kedu ka Cloudya si arụ ọrụ
2 Ọrụ dị na Cloudya
3 NFON igwe ojii
4 Otu esi enweta Cloudya
Kedu ihe na kedu ka Cloudya si arụ ọrụ
Ọ bụ igwe ojii telephony usoro, nke na-enye ohere ka a nkwukọrịta free nke agbatị na ụlọ ọrụ. Otu uru dị ukwuu Cloudya na-enye bụ na enwere ike iji ya na ụdị ngwaọrụ niile, dịka PC, laptọọpụ ma ọ bụ ama. N'ụzọ dị otú a, oku ma ọ bụ oku vidiyo nwere ike ịme ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na nke a abụghị naanị ihe enwere ike ịme ekele maka ọrụ a.
Ọ na - enye gị ohere ịnwe ọrụ ndị ọkachamara nke ndọtị ọfịs gị mgbe niile, n'akpa gị. N'ihi ọrụ a ọ ga-ekwe omume na-enweta faxes digitally, na ama gị, ebe ọ bụla ị nọ. Na mgbakwunye, ha nwere ime ụlọ nzukọ ọgbakọ, dabere na eziokwu dị adị. Ezubere ha iji chekwaa ụgwọ njem ma nwee nzukọ n'ụzọ a kpọmkwem site na ihe nchọgharị kọmputa.
Ihe a niile ga-ekwe omume site na interface enyi na enyi. Emebe Cloudya n'ụzọ dị ka ndị ọrụ niile na ụlọ ọrụ nwere ike iji ya mee ihe ọfụma. A na-eji nọmba ekwentị pụrụ iche na igbe mbata ịkpọtụrụ onye ọrụ ọ bụla. Nke a dị oke mkpa iji rụọ ọrụ maka ndị ọrụ ọ bụla.
Ọrụ dị na Cloudya
Na ngalaba gara aga, ekwuola ụfọdụ ọrụ ya, ọ bụ ezie na NFON n'onwe ya na-enye ndị niile a ndepụta zuru ezu nke ọrụ a gụnyere na Cloudya, nke bụ ihe nwere ike iwepụta mmasị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Nke a bụ ndepụta dị ugbu a nke ọrụ dị:
Cloud ekwentị usoro: Isi mmalite nke oku na-ebugharị, oku mba na mba, Faksị mebere
Njikwa oku: Nyefee oku, IVR, CLIP, CLIR, ịkpọgharị usoro, ozi olu
Ngwakọta ngwaọrụ: Ekwentị menus
Ngwugwu ngwa: Moderated oku na-aga ogbako, smartphone mwekota
Telecommunication ngwa: ITC
Agbanyeghi sọftụwia: Nrụọrụ panel
Nke a na-enye ezi echiche nke ọtụtụ ngwaọrụ na nhọrọ dị n'ozi a. N'ụzọ dị otú a, nkwukọrịta nke ụlọ ọrụ ga-agbanwe n'ụzọ dị mma. Nnwere onwe karị, ịdị mfe iji na ohere ndị ọzọ, nke na-eme ka nkwukọrịta ka mma n'oge niile.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ NFON na Cloudya na-enye. Enwere ọrụ nke ọrụ 150 dị, na ị pụrụ ịhụ na njikọ a. A na-ahazi ha ụzọ maka ụlọ ọrụ dị iche iche, dịka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akụ, ebe azụmahịa na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha na-emegharị n'ụzọ zuru oke na ụdị azụmaahịa niile.
NFON igwe ojii
Ọtụtụ ndị ọkachamara ahụla igwe ojii igwe ojii dị ka ọdịnihu na nkwukọrịta. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-ahụ etu esi enweta ọnụnọ na ahịa, ọkachasị n'ọhịa azụmaahịa, ebe mgbanwe dijitalụ na-eme. Tinggba nzọ na telephony na ígwé ojii na-enye ụlọ ọrụ ohere ịdabere na ndị ọrụ buru ibu. Nke a bụ ihe nwere ike were obula na-eri ego maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Na mgbakwunye, site na ịkụ nzọ dị ka Cloudya, ị ga-enweta ọrụ ọkachamara na nke ọkachamara, nke na-enye nlebara anya nke ọma dabere na ụlọ ọrụ ahụ.
Otu igodo igwe ojii na igwe ojii bụ na ọ bụ teknụzụ nwere ntụkwasị obi na-arụ ọrụ nke ọma ma na-enye ụlọ ọrụ ohere inweta nsonaazụ kacha mma. Dị ka a na-enye ezigbo nkwurịta okwu n'oge niile, ma n'ime ma na mpụga. Ya mere, ọ ga-adị mfe ịnọrọ ma na-enweta ndị ahịa, na-enweghị nkwụsị ọ bụla n'oge ụfọdụ. Otu uru ya bụ na ọbụlagodi na obere ụlọ ọrụ, ọ na-enye ohere ịnwe ọkụ ọkụ, iji zaa oku sitere n'aka ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa.
Ọzọkwa ga- gosi mgbanwe ọ na-enye, na ọnụahịa dị ala, na mgbakwunye na ịkwaga ọfịs ọ dị mfe ịme ya n'ụzọ a. A na-enye ohere ịnweta ebe a na-ekwu ebe a na-agbanwe agbanwe na ebe ọ bụla n'ụwa, ihe dị oke mkpa maka ndị ọrụ ga-agagharị ọtụtụ na ọrụ ha. Tozọ ịnweta dịkwa mfe, ebe ọ bụ naanị na ị ga-ejikọ ngwaọrụ ahụ.
Ejiri NFON dị ka ezigbo ngwọta na ngalaba ahịa a. Nkwenye nke mma, na-enye ezigbo ọrụ, yana uru kachasị mma maka ego na ahịa. Na mgbakwunye, ha na-ekwe ka ịkwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ, ebe ọ bụ na oku sitere na otu ebe a na-agbanwe agbanwe na n'etiti ndị ahịa anaghị akwụ ụgwọ. Ihe na-enye ụlọ ọrụ ohere ịchekwa nke ọma.
Otu esi enweta Cloudya
Maka ụlọ ọrụ ndị ahụ chọrọ ịmatakwu banyere Cloudya, ha nwere ike ịga webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ, na njikọ ahụ anyị hapụrụ gị. Nke a bụ ozi niile gbasara ọrụ ndị dị na CloudyaNa mgbakwunye na enwere ike ịhụ uru ọ na-enye dabere na ụdị ụlọ ọrụ ị nwere. Yabụ ị nwere ike ịmata n'ụzọ dị mfe ihe ọ nwere ike itinye na ụlọ ọrụ na ngalaba nkwukọrịta, ma ọ bụ ego akwụ ụgwọ metụtara ịkụ nzọ na ha.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwere ike ịkpọtụrụ NFON ozugbo site na weebụsaịtị gị, maka ozi ndị ọzọ gbasara Cloudya, ma ọ bụ n'ihe banyere ịmalite ịmalite iji ọrụ ha. Ndị otu gị ga-abụ onye ga - eduzi gị n'usoro ibido ọrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Cloudya: Igwe igwe igwe igwe kacha mma